कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचारमा तयार मेडिसिटी अस्पताल, सँगसँगै चिकित्सकको जागरण अभियान – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/कोरोनाभाइरस संक्रमितको उपचारमा तयार मेडिसिटी अस्पताल, सँगसँगै चिकित्सकको जागरण अभियान
ललितपुर– नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले कोरोनाभाइरस(कोभिड–१९) संक्रमित विरामीको उपचारका लागि तयार रहेको जनाएको छ ।अहिलेसम्म संचालनमा नआएको अस्पतालको आठौं तल्लालाई कोभिड–१९ संक्रमित विरामीको उपचारका लागि तयार गरिएको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. सुनिल शर्मा ढकालले बताए । तत्कालका लागि १५ बेडको आइसोलेसन र ७ वटा आइसीयू कक्ष निर्माण गरिएको डा. शर्माले बताए । आवश्यकताअनुसार बेड थप्दै लैजाने पनि उनले बताए ।
अस्पतालले संक्रमित विरामी, अस्पताल चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी आवतजावतको लागि भिन्दै बाटो बनाएको छ । भने, संक्रमित विरामीको उपचारमा खटिने डाक्टर, नर्स तथा कर्मचारीले अन्य विरामी हेर्न पाउने छैनन् । साथै संक्रमित विरामीको उपचार गर्ने डाक्टर, नर्सहरुले लगातार सात दिन विरामीको उपचार गर्नेछन्, लगत्तै सात दिन अस्पतालले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनमा बसेपछि मात्र घर जाने पाउनेछन् । सात दिनको घरको बसाईपश्चात पुनः अस्पतालमा विरामी उपचारका लागि खटिने गरी तयारी गरिएको डा. शर्माले बताए ।
मेडिसिटीसँग विरामीको उपचारका लागि प्रसस्त ठाउँ भएको र चिकित्सकको टोली पनि प्रसस्त रहेकाले संक्रमित विरामीको उपचारमा कुनै कमि हुन नदिने डा. शर्माले बताए ।मेडिसिटी अस्पतालले आफैले व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पीपीई) निर्माण गर्न पनि थालेको छ । त्यसैगरी, विश्व महामारीको रुप लिएको कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जागरण अभियान पनि संचालन गर्दै आइरहेको छ ।
मेडिसिटीले महामारी नियन्त्रणका लागि भिडियोमार्फत सन्देशमुलक गीत निर्माण गरी प्रसारण गर्दै आएको छ भने अस्पतालका वरिष्ठ डाक्टर तथा नर्सहरुद्वारा भाइरसबाट कसरी जोगिनेबारे विभिन्न भाषामा चेतनामूलक सन्देश प्रसारण गरीरहेको छ ।अस्पतालले आफ्नो फेसबुक पेज र अस्पतालको साइटबाट डाक्टरहरुको सल्लाह, सुझाव र जिज्ञासाको जवाफ प्रत्यक्ष रुपमा दिँदै आएको छ । यदि तपाईलाई केही समस्या वा जिज्ञासा भएमा मेडिसिटीको फेसबुक लाइभमार्फत डाक्टरसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ । फेसबुक लाइभ एक दिनको फरकमा बिहान १० बजे सुरु हुनेछ ।
Our Appeal to You to #StayHome
कोरोना संक्रममणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न यहाँहरु घरै बसीदिनुहोला । Stay Home, Stay SafeOur Initiation to reach out to all.
Gepostet von Nepal Mediciti am Freitag, 3. April 2020
हालै गरिएको अनुसन्धानले दैनिक खोर्सानी खाने मानिस लामो समय बाँच्ने देखाएको छ।